10-ka ugu sareeya ee Weydiinta Miisaan luminta Powder-ka adduunka
10ka ugu sareeya aduunka ee iibinta culeyska luminta budada
/blog/Lumid Miisaan/10ka ugu sareeya aduunka ee iibinta culeyska luminta budada
Posted on 09 / 01 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Lumid Miisaan.
Daawooyinka sidoo kale waxay hagaajiyaan waxqabadka noradrenaline ee "xarunta quudinta" ee maskaxda aadanaha, hypothalamus. Bini aadamka hypothalamus wuxuu xakameynayaa isku dheelitirka tamarta ee nidaamka jirka. Macluumaadka ku saabsan bakhaarrada tamarta shaqsiyeed waxaa lagu soosaaray hypothalamus oo nidaamisa qaadashada cuntada iyo rabitaanka cuntada. Ku xirnaanshaha Noradrenaline iyo waxqabadka 'hypothalamus' wuxuu leeyahay saameyn hoos u dhac ah oo ku yimaada rabitaanka cuntada. Daawooyinka noocan ah waxaa ka mid ah:
Karti la'aanta ayaa si toos ah ugu dhiganta qiyaasta daawada la qaatay. Maaddaama qiyaasta daawadu ay korodho, soo-saarka tamarta ayaa noqda mid aan waxtar lahayn, heerka dheef-shiid kiimikaadka ayaa kor u kaca (iyo qaddarka dufanka badan ayaa la gubay) si loo daboolo baahida tamarta loona magdhabo waxtarka. DNP waa mid ka mid ah wakiilada ugu fiican ee loo yaqaan iskuxirida fosforyaalka oksida. Fosfooriyada 'ADP' ee loo yaqaan 'ATP synthase' ayaa ah "mid aan kala go 'lahayn ama ka go'ay qiijiinta.
Ka dib markii aan saacado badan baaris ku sameynay daawooyinka miisaanka lumay, waxaan awoodnay inaan aqoonsanno wax yar oo ah Cunnooyinka ugu Fiican ee Iibinta Miisaanka Dunida ee 2018. Waxyaabahan dheeraadka ah ee budada lumiya ayaa ka kooban orlistat budada miisaanka oo yaraada iyo budada miisaanka luminta lorcaserin. Si ka duwan sida loo yareeyo culeyska miisaanka luminta ee laga helo dukaan kasta oo daroogo ah, daawooyinkan miisaanka hoos u dhaca oo ay u qoreen xirfadlayaal caafimaad ayaa soo maray sanado badan oo tijaabo ah si ay shaanad uga helaan oggolaanshaha FDA iyo dhowr maamul oo kale. Waxaan kugula talineynaa inaad tijaabiso daawooyinkaan maxaa yeelay waxaa la cadeeyay inaysan aheyn kaliya kuwa waxtar leh laakiin sidoo kale amaan u ah isticmaalka.
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa 2021	7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa ee Armodafinil